Iingcebiso zobuhle-iBezzia | IBezzia
Ngaba wakha waziva ungenazimbono zokuthambisa ngosuku olukhethekileyo? Amaxesha amaninzi sifuna uncedo oluncinci ngamaxesha athile kwaye ngenxa yeso sizathu, kwimagazini yethu sifuna ukukwazisa konke ubuhle obuhle kunokwenzeka ukuqaqambisa iimpawu zakho ngeyona ndlela ilungileyo.
Ke ngoko, kule migca siya kukunceda ukudibanisa eyakho ithowuni yokwenza izithambiso ubuso ngemilebe, ukufihla amabala esikhumbeni okanye ukufumanisa imveliso yobuhle eshiya iinwele zakho njengoko uhlala ufuna ukuba nazo.
Njengakwimigca ngokubanzi iindidi zobuhleSiza kugxininisa ukubonisa iimveliso ezahlukeneyo kubafazi beentlobo ezahlukeneyo: izangqa ezimnyama kuxhomekeke kuhlobo lwesangqa esimnyama; izithambiso zobuso ngokuxhomekeke kuhlobo lolusu; okanye imilebe yomlomo kuxhomekeke kuhlobo lomlomo.
Siza kukubonisa indlela yokulandela inyathelo ngenyathelo, ukuze kube lula kuwe ukuba uyenze ekhaya.
Indlela yokwenza i-scalp scrub yasekhaya
por UToñy Torres yenzayo Iiveki ze2 .
I-scalp yiyona nto ijongene nempilo yeenwele. Ngoko xa ingalunganga...
Kunini apho ingumbono olungileyo ukuqala ukusebenzisa i-contour yamehlo?
por UToñy Torres yenzayo Inyanga e-1 .
Ulusu olujikeleze amehlo ngaphandle kwamathandabuzo lolona lusube luthambileyo ebusweni, oluqale lutyhola indlela…
Imikhwa yobuhle emi-6 ukuze ube mhle kwaye ube sempilweni
por UToñy Torres yenzayo Iinyanga ze3 .
Ukuba mhle nokuba sempilweni kuyahambisana, kuba obona buhle bugqwesileyo bobo bukhazimla ingqondo kunye…
Amaqhinga okunqanda ukuthoba xa ulahlekelwa ngumzimba
Ukuba ulandela i-slimming diet, kufuneka ulumke kakhulu ukunqanda ukuthoba xa ulahlekelwa ubunzima. Yi le…
Iingcebiso zobuhle zasekhaya eziya kukumangalisa
Oomama bethu kunye noomakhulu bethu banakekele ulusu lwabo, iinzipho kunye neenwele ngeemveliso zendalo. Iindlela zobuhle zasekhaya eziye zabanceda...
3 amayeza asekhaya amehlo adiniweyo
por UToñy Torres yenzayo Iinyanga ze4 .
Izilungiso zasekhaya zamehlo adiniweyo zihluke kakhulu kwaye zisebenza kakuhle kangangokuba kukufanelekile ukuzama. Abantu abaninzi…
Iingcebiso zobuhle ngaphezu kwama-40
La maqhinga obuhle kubantu abangaphezu kwama-40 aya kukunceda ubonise bonke ubukhazikhazi bakho kunye nobuhle bendalo. Ngoba kutheni…
Ubuhle besiqhelo bolusu lwe-atopic
Ulusu lwe-atopic lufuna ukunakekelwa okukhethekileyo kunye nenkqubo ethile yobuhle. Olu hlobo lwesikhumba lugqithise kakhulu ...
Iingcebiso zobuhle zokubonisa imilenze egqibeleleyo
Ngaphandle kokuphathwa kakubi yimozulu yasebusika, asinakuyeka ukucinga ngokufika okulandelayo kwe…
Amanqaku oluliweyo avela eluswini xa soluliwe kakhulu kunye neentsinga ezibonelela ngekhefu lecollagen kunye…
4 amayeza asekhaya ukuthomalalisa ulusu olunomsindo
por UToñy Torres yenzayo Iinyanga ze5 .
Ukuba nolusu olucaphukileyo kuxhaphake kakhulu ngenxa yokuvezwa rhoqo kwiiarhente zangaphandle, ilanga, ...
Ungakunciphisa njani ukudumba kwamaqhakuva, awona maqhinga mabi!
Iinwele: indlela yokwenza izinto ezi-blonde ekhaya
Uyenza njani i-hardener yakho yesikhonkwane yasekhaya
Ukulungiswa kwangaphambi kombala ngaphambi kokuba udaye ukuze umbala uhlale ixesha elide
Ungazikhathalela njani iinwele ezidayiweyo ezimfusa
Uyifumana njani imvume ekhaya
Iinwele zokufihla impumlo
Fumana iiglasi zakho ezifanelekileyo ngokwendlela yobuso bakho
Ungazikhulisa njani iinwele ngokukhawuleza?
Ungasusa njani iinwele kwingono